Europe Travel Xiligii Spring The | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Europe Travel Xiligii Spring The
Europe Socda April ka dhigan Europe Safarka Inta lagu jiro Time Spring The! Maadaama Yurub inteeda badani ka fog tahay dhulbaraha, inta badan caanka ah magaalooyinka ayaa weli ku jira xoogaa qabow ee April (Boorso sida). weli, Europe Socda April noqon kartaa mid ka mid ah bilaha ugu fiican ee sanadka si aad u booqato ugu mashquulka badan iyo ugu magaalo caan ah halkan. heerkulka waa diiran ku filan farxad leh meelaha la, weli tirada badnaa aad bay uga yar tahay waxaad arki doontaa laga bilaabo May iyo June. Halkan waxaa ah liistada meelaha aan ku booqanno safarkaaga Yurub inta lagu jiro xilliga gu'ga!
Masawirka waxaa lagu qabtay Europe Travel waqtiga gu'ga, sawir nabad ah harada tuulooyinka iyo biyaha buluug ah oo qoto dheer u jeedi dooxada ah Alps, halkaas oo danbow baraf safashada sameeyaan hortegi weyn in Borromeo Islands faraxgelinta; beguiling Como, halkaas oo buuraha dhumbadaan biyaha moolka dheer oo picturesque tuulooyinka ugu cuslaataan dhaadhacyadii. noocaan ah goobaha yihiin nooca in lagu dhiirrigeliyo aad in aan gabayada qoro ama iskooda isku laab meel eey hoos u galay. Waxa kaliya sidaas darteed la yaab leh si nabad ah!
Booqo gobolka in April, Guga oo qayb ka ah Aragti Guides faraxgelinta Talyaani Lakes safarka to stay ahead of the crowds.
Europe Safarka Inta lagu jiro Spring ee Barcelona / Spain
Dabaal bilowgii Spring iyo tareen si ay Barcelona. Waxa aan ka qaadi doonaa wax badan inuu dhaco jacayl magaaladan Spanish dadka Spanish, kuwaas oo had iyo jeer la xasuusto in aad isku dejiso oo waxay qaadan siesta maalinle ah – seexasho deg deg ah qadada ka dib, halka nasto on caddaan ah xeebaha, cunidda paella delicious, iyo cabo sangria cusub.
Jiifa goobta Catalonia ah, si toos ah xeebta waqooyi -bari Mediterranean ee Spain, Barcelona waa magaalada labaad ee ugu weyn magaalada Spain, iyo mid ka mid ah ugu caansan meelaha dadka u safraya Europe Travel waqtiga gu'ga. Barcelona waa crossover oo xiiso leh GEMS naqshadda cajiib ah oo gaboobay oo design casriga ah. Haddii aad tahay taageere weyn u ah naqshadaha Gaudi, halkan u timid inaad aragto Qurxiyey Sagrada Familia, Casa Batllo, iyo Güell Park. Barcelona waxaa badanaa lagu kululeeyo sannadka oo dhan, oo aad this booqan kartaa dalxiiska saaxiibtinimo magaalada wakhti kasta oo sannadka ah.
Waxaad ogaataan in Bruges, Belgium, waxaa loogu dhawaaqaa “broozh,” laakiin qaar badan oo, iyo geesiyaal ah “In Bruges” Filimka, Sida xaqiiqada ah ma samayn. Iyagu waa dad Dublin ah, waxaa soo diray iyagoo Tababaraha muddo labo isbuuc ah ka dib markii hit a aad u qaldan. Mid ka mid ah waa baadi dhallinyarada arka sabab lahayn in ay meel kasta laakiin Dublin noqon; kale ah, ka weyn, yirii, dheeraad ah oo cajiib, Oo Iibsaday tilmaame iyo hadalkii: “Bruges waa magaalada ugu sii raagayaan Dr Makumbe ee Belgium!”
Sidaas waxaa hubaal u muuqataa. Haddii filimka wax kale ma dhammaado, waxay dhiirigelisay dad badan oo rabitaan deg deg ah inay soo booqdaan Bruges.
used waa labo-mid-khaas ah sanadka oo dhan! Been ka dhexeeya France iyo Spain, magaalada yar ayaa si fiican loogu yaqaanaa saamayn xoog leh labada Magaalo keeno, dhammaatay caan biirka iyo shukulaatada. oo ay la socdaan Paris, Prague, iyo Budapest, tani waa mid ka mid ah ugu taataabtay magaalo oo Yurub ka buuxa kanaalada iyo guryaha Dr Makumbe jir.
Europe Safarka Inta lagu jiro Spring ee Cologne / Germany
Tani 2,000 magaalada sano jir ah waxa uu ku yaalaa galbeedka Germany oo waa xarun dhaqan ugu weyn ee gobolka. Iyada oo cathedrals Dr Makumbe oo views breathtaking webiga, Cologne waa meel damaca-istaahila a. Gaar ahaan loogu talagalay kuwa raba in ay ku boodaan galay dhaqan cusub iyo waayo-aragnimo hab cusub oo halka nolosha safraya Europe. Ha iloobin kamaradaada! Cologne waa magaalo maskax furan. Laga yaabee inaysan u qurux badnayn marka hore sida magaalooyinka kale, laakiin marka aad soc socotid,, waxaad arki doontaa in ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka nicest ee Germany iyo hubaal liiska for Europe Travel our ee waqtiga gu'ga.
The Altstadt (magaalada jir) has some very nice buildings, taas oo ah been xaq webiga Rhine. Just next to it is the Cologne Cathedral, site dhaxal ahaan dunida UNESCO a. Waxaa xusid mudan fuulid kor mid ka mid ah laba munaaradaha galay.
Cologne ku saabsan tahay jawi and its people. Dadka ku jira Cologne jecel magaaladoodii. They have their own dialect and quite a few music guutooyin gabya magaalada lahjado kuwaas oo ku saabsan. Time si muraajaco ku barashada luqad cusub!
Maxay yihiin hadalladan aad sugayso? Waxaa jira badan oo fasaxyada bangiga in aad ka faaiidaysan karaan iyo inay tagaan Yurub Travel waqtiga gu'ga. Save A tareenka sidoo kale waxaa super fudud inay jartaan tikidhka tareenka in mid ka mid ah meelaha kuwan, si dhakhso ah oo effortlessly!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-travel-during-spring%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / NL in ay / ru ama / iyo luuqado badan.
#AprilTravel #EuropeinApril #traveleurope europetravel eurotrip Spring tareen safarka travelcologne